Inhloko ZeNdaba Nhlolanja 02, 2021
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abahlolwe batholakala beleCovid 19, ngokutshona kwelanga layizolo abalikhulu lamatshumi ayisithupha-160, bengeze inani leli laya kwabazinkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu lantathu-33,548, eZimbabwe jikelele.
Uhulumende weZimbabwe uphambule abongi abalitshumi lambili ebasusa esibhedlela seUBH ukuze bayesebenza eThorngrove Hospital, emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwabongi esibhedlela sekhansili yakoBulawayo.
Izigidi zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleSouth Africa kugoqela lezikulelo lizwe ngokungekho emthethweni zamukele ngenjabulo umbiko othi lazo zizahlatshwa ijekiseni lokuvikela iCoronavirus.
UMnu. Douglas Mwonzora webandla leMDC-T namuhla ukhethwe ukukhokhela ikhomithi yedale le Standing Rules and Orders ephalamende njalo lelidale livaliwe okwesikhatshana kulandelwa iziqondiso zokwenqabela i COVID 19.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukudakwa kwelizwe phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le coronavirus kungaba kungesinye sezizatho ezibangela ukuthi isisindo sedola le Zimbabwe singawi ngamandla nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo “The Connection” sixoxa labatsha bechasisa ababhekane lakho okuphathelane lokuqonga kwenani lababanjwa beleCovid 19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele.